Mateo Asɛmpa No 8:1-34
Ɔsaa ɔkwatani bi yare (1-4)
Ɔsraani panyin bi gyidi (5-13)
Yesu saa nnipa pii yare wɔ Kapernaum (14-17)
Sɛnea yebedi Yesu akyi (18-22)
Yesu maa mframa yɛɛ dinn (23-27)
Yesu maa ahonhommɔne kɔhyɛɛ mprako mu (28-34)
8 Bere a osian fii bepɔw no so no, nnipadɔm bebree dii n’akyi. 2 Na hwɛ! ɔkwatani bi bae, na ɔbɛkotow no kae sɛ: “Awurade, sɛ wopɛ a, wubetumi asa me yare.”*+ 3 Enti ɔteɛɛ ne nsa kaa no, na ɔkae sɛ: “Mepɛ! Wo ho ntɔ wo.”*+ Na amonom hɔ ara ne kwata no kɔe.+ 4 Ɛnna Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ na woanka ankyerɛ obiara;+ mmom kɔ na fa wo ho kɔkyerɛ ɔsɔfo no,+ na fa akyɛde* a Mose hyɛ too hɔ no ma,+ na ayɛ adanse ama wɔn.” 5 Bere a ɔkɔɔ Kapernaum no, ɔsraani panyin bi baa ne nkyɛn bɛpaa no kyɛw+ 6 sɛ: “Owura, m’akoa abubu da fie, na ɔrehu amane papaapa.” 7 Ɔka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ midu hɔ a, mɛsa no yare.” 8 Ɔsraani panyin no ka kyerɛɛ no sɛ: “Owura, memfata sɛ woba me fi. Wo de, ka biribi, na m’akoa no ho bɛtɔ no. 9 Efisɛ me nso mehyɛ obi ase, na mewɔ asraafo hyɛ m’ase. Meka kyerɛ oyi sɛ, ‘Kɔ!’ na ɔkɔ, na meka kyerɛ ɔfoforo sɛ ‘Bra!’ na waba, na meka kyerɛ m’akoa sɛ ‘Yɛ eyi!’ na wayɛ.” 10 Bere a Yesu tee saa no, ɛyɛɛ no nwonwa. Na ɔka kyerɛɛ wɔn a wodi n’akyi no sɛ: “Mereka nokware akyerɛ mo: obiara nni Israel a mahu gyidi a ɛso saa wɔ ne mu.+ 11 Nanso mereka akyerɛ mo sɛ nnipa bebree fi apuei ne atɔe bɛba, na wɔne Abraham ne Isak ne Yakob abɛtena pon ho adidi wɔ ɔsoro Ahenni mu.+ 12 Na Ahenni mma no de, wɔbɛtow wɔn agu sum mu wɔ abɔnten. Ɛhɔ na wobesu na wɔaka wɔn se asi so denneennen.”*+ 13 Afei Yesu ka kyerɛɛ ɔsraani panyin no sɛ: “Kɔ. Sɛnea woagye adi no, ɛmmra mu saa ara mma wo.”+ Na akoa no ho tɔɔ no saa bere no ara.+ 14 Na bere a Yesu baa Petro fi no, ohui sɛ n’asebea+ da hɔ a ɔyare atiridii.+ 15 Enti osoo ne nsa,+ na atiridii no gyaee. Afei ɔbea no sɔree, na ofii ase som Yesu. 16 Na eduu anwummere no, nkurɔfo de nnipa bebree a wɔwɔ ahonhommɔne brɛɛ no, na ɔkaa asɛm de tuu ahonhom no, na ɔsaa wɔn a wɔyare nyinaa yare, 17 sɛnea ɛbɛyɛ a nea wɔnam odiyifo Yesaia so kae no bɛba mu sɛ: “Ɔno na ɔfaa yɛn nyarewa na ɔsoaa yɛn yaw.”*+ 18 Bere a Yesu huu nnipadɔm a atwa ne ho ahyia no, ɔka kyerɛɛ asuafo no sɛ wontwa nkɔ asuogya.+ 19 Na ɔkyerɛwfo bi bae, na ɔbɛka kyerɛɛ no sɛ: “Ɔkyerɛkyerɛfo, baabiara a wobɛkɔ no, medi w’akyi.”+ 20 Nanso Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Sakraman* wɔ abon, na ewim nnomaa wɔ mmerebuw, na onipa Ba no de, onni baabi a ɔde ne ti to.”+ 21 Na osuani foforo ka kyerɛɛ no sɛ: “Awurade, ma me kwan ma minkosie me papa ansa.”+ 22 Yesu ka kyerɛɛ no sɛ: “Kɔ so di m’akyi, na ma awufo nsie wɔn awufo.”+ 23 Na bere a ɔforoo ɔkorow no, n’asuafo no dii n’akyi.+ 24 Afei, hwɛ! mframa kɛse bi bɔe wɔ po no so, enti na asorɔkye no rekata ɔkorow no so; nanso ɔno de, na wada.+ 25 Na wɔbaa ne nkyɛn benyan no. Na wɔkae sɛ: “Awurade, gye yɛn na yɛrebewuwu!” 26 Nanso ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Adɛn nti na ehu aka mo* saa, mo a mo gyidi sua?”+ Afei ɔsɔree, na ɔteɛteɛɛ mframa ne po no, na ɛyɛɛ dinn.+ 27 Enti mmarima no ho dwiriw wɔn, na wɔkae sɛ: “Onipa bɛn koraa ni? Mframa ne ɛpo mpo tie no.” 28 Bere a oduu asuogya wɔ Gadarafo asaase so no, mmarima baanu a wɔwɔ ahonhommɔne fi amusiei* behyiaa no.+ Ná wɔn ani so yɛ krakra paa, enti na obiara nni akokoduru a ɔde betwam afa saa kwan no so. 29 Na hwɛ! wɔteɛteɛɛm kae sɛ: “Dɛn na yɛne wo wɔ yɛ, Onyankopɔn Ba?+ Wobaa ha sɛ worebɛhaw yɛn+ ansa na bere a wɔahyɛ no adu anaa?”+ 30 Ná mprako bebree bi redidi wɔ akyirikyiri baabi.+ 31 Enti ahonhommɔne no fii ase paa no kyɛw sɛ: “Sɛ wutu yɛn a, ma yɛnkɔhyɛ mprako yi mu.”+ 32 Enti ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ!” Ɔkaa saa no, wopuei, na wokowurawuraa mprako no mu, na hwɛ! mprako no nyinaa de mmirika fii bepɔw* no so koguu po no mu, na wowuwui wɔ nsu no mu. 33 Na wɔn a wɔhwɛ mmoa no guanee, na wɔkɔɔ kurow no mu kɔkaa nea asi nyinaa; wɔkaa mmarima a wɔwɔ ahonhommɔne no asɛm no nso kaa ho. 34 Na hwɛ! kurow no mufo nyinaa puei sɛ wɔrekohyia Yesu. Bere a wohuu no no, wɔsrɛɛ no sɛ omfi wɔn mantam mu hɔ nkɔ.+
^ Anaa “afɔrebɔde.”
^ Anaa “ahoɔmmerɛw.”
^ Anaa “ɔbotan a etweri hɔ.”